About Us - I-Zhoushan Tanso Plastics Machchan Co, Ltd.
Isikulufa se-Rubber Extruder
Isikulufa Nemgqomo Ngomshini We-extrusion
Isigaxa se-Conical Twin Screw Ne-Deticalable Barrels
I-Parallel Twin Screw Ne-Barrel
Isikulufa Esingashadile Futhi Umgqomo
I-ZhouShan Tanso Plastic Machchan Co, Ltd ingumkhiqizi ochwepheshe wamathuluzi wokufaka wezimboni owasungulwa ngo-1990.
Sinikezela ngokubumba umjovo, i-extrusion kanye ne-irabha ngemikhiqizo yekhwalithi enjengezikulufo, imigqomo kanye nesikhunta. Sithembisa ukuqhubeka ngokunikela ngesikhathi sethu nobungcweti ekuthuthukisweni kwemikhiqizo yangaphandle ngaleyo ndlela sakha inani elikhudlwana lamakhasimende.
I-TANSO iphumelele ukuqashelwa nokwazisa kuwo wonke amakhasimende ethu ngezinsizakalo zethu zokuthengisa ngemuva. E-TANSO, asigxili kuphela kukhwalithi yemikhiqizo yethu kepha futhi nokuyisebenzisa kahle. Ithimba lethu lokunakekelwa kwamakhasimende alisebenzisayo lilandela ngezikhathi ezithile nawe ukuze uqinisekise ukuthi imishini isetshenziswa kahle ukukhulisa inani lomkhiqizo futhi yandise isikhathi sayo sokuphila. Lapho kuvela inkinga yezobuchwepheshe, ngesikhathi esifanele, iqembu lethu lizokufundisa ukunikeza izidingo zokudubula ezinkingeni.
1. umphakeli wezobuchwepheshe, ngokusho kwemikhiqizo ehlukile, sikutholela isisombululo esifanele kunazo zonke
2. ukuhlinzeka ngokufaka okusebenzayo ekukhethweni kwamathuluzi
3. Inkinga yokudubula kanye nezinkinga zomgogodla wokuqinisekisa imiphumela ephezulu yekhwalithi
U-Tanso ungumnikazi wezinto zokukhiqiza ezisezingeni eliphakeme kakhulu nemishini yokuphamba esesikhathini ukuze ahlangabezane nezidingo zobuchwepheshe eziqondile zemikhiqizo ngayinye. Isikhungo sethu siqinisekiswe yi-ISO9002
AMAKlayenti ETHU AYESIKHATHI
INGABE TANSO LAKHO